Yepamusoro-Giredhi Grey + Cardamom Green, Mudiki Uye Yepamusoro-Yepamusoro-Yekugara | Yuanhe Daqian - Best Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
musha / Interior design / Yakakwira-Giredhi Grey + Cardamom Girini, Mudiki Uye Yakakwira-Yemahara Kugara | Yuanhe Daqian
2021 / 08 / 15 kupatsanuraInterior design 3381 0
Kana iyo yekugara isiri chete pfungwa yenzvimbo, iyo aesthetics yehupenyu inotanga kupinda mumoyo wevanhu venguva ino. Imba haisi nzvimbo yekugara chete, asiwo mweya wakadzika midzi wevagari.
Yuanhe Daqian anotarisa icho chigadzirwa musika weSunac Oriental Chen Yuan kubva pamaonero evashandisi. Muchirevo chemazuva ano, hupenyu hwakaringana hunoshandurwa mumazita emazuva ano. Zvakasiyana uye zvidiki, zvakavanzika asi zvakawanda, zvinopa nhengo yega yega yemhuri simba idzva.
Mavambo akanaka anogara aine kusanyara, uye ndizvo zvakaita magadzirirwo epamba.
Imba yekutandarira inovhura neyegiredhi repamusoro grey uye beige color scheme, uye inozorodza color scheme inowedzera yakapfava firita kune iyo nzvimbo. Iyo inozorodza color scheme inowedzera yakapfava firita kune iyo nzvimbo, ichirerutsa kunze kusashivirira kwehupenyu uye kunzwa nyaradzo yekudzokera kumba. Iyo fenicha inogadzirwa nemachira emhando yepamusoro uye dehwe, iine mashoma esimbi zvigadzirwa, zvinoenderana zvakafanira kusimudzira mhando uye hutongi hwenzvimbo uye kuratidza kunakirwa kwakanaka kweimba.
Cardamom girini uye kupenya kwezuva orenji zviratidzo zvehutano uye kujekesa iyo nzvimbo. Kunyangwe ikave isinganzwisisike, zvakare ine simba rinoshamisa. Ivo vakaita sechiedza chidiki chenyeredzi muhupenyu husina kugadzikana, vachitarisira nhengo yega yega yemhuri.
Midziyo yakapfava yakagadzirirwa kuchengetedza mwenje wepanyama zvakanyanya sezvinobvira. Pakudoka kwezuva, chiedza chezuva chinodira munzvimbo yekugara, kubvisa kusagadzikana uye kunetseka muguta rine vanhu. Panguva ino, dhizaini inokanganisa miganhu pakati penzvimbo nemasikirwo uye inobvumira mhuri kuti ifare mumufaro wehupenyu hwemhuri.
Iko musimboti wedhizaini "yakanangana nevanhu", saka tinokudza hunhu hwemunhu wega wega. Isu tinovaka inowirirana uye yakasununguka dhizaini mamiriro ane akasiyana hupenyu zviitiko pamwe neicho chaicho-chehupenyu utsi uye magirazi.
Iko kushupika kwevechidiki vazhinji kuve nekamuri yekutamba kumba. Mugadziri ane nzwisiso yakadzama mune zvinodikanwa zvemapoka epwere dzazvino uye anorasa maitiro akaomarara. Iyo dhizaini yakashongedzwa nemuchadenga makomputa zvigadzirwa. Iwo chete iwo madziro ekupenda uye mijaho manhamba ndiwo chaiwo kudzora kwemashoko. Ichi chiratidzo chakasimba chezvavanofarira uye zvinokuvaraidza zvevagari.
Zvese zviri kukura, hupenyu hune tariro! Dzokera kune chakakosha nzvimbo. Cardamom girini uye kupenya kwezuva orenji kunoenderera mukamuri yekurara, kuchitsanangura pfungwa yemunda unodonhedza. Iyo inodzora color scheme inoyerera neiyo nzvimbo, ichivhengana mune yakasikwa donje uye machira, uye yakavakirwa mune yakapfava uye ine fluffy zvekufuga. Iyo mutinhimira wakasiyana uye unopindirana uye unoenda wakananga kunongedzo wepamusoro-soro wekugara.
Minimalist mapatani uye zvishongedzo zvinowedzera kuumba inodziya yekurara mamiriro. Nguva yekuzorora kwazvo yezuva ndipo paunovhara maziso ako. Pano iwe unogona kunakirwa nekunyarara uye kutora simba rekutarisana nezvichauya zvitsauko zvehupenyu.
Iko kutsvaga kwemhuri yega yega kurega vana vavo vachiburitsa yavo yechokwadi rudo nerudo mudzimba dzavo. Isu takawedzera mashandiro munzvimbo shoma. Imba yevana haisi chete yekurara yakazvimiririra nzvimbo, asi zvakare zvine musoro huwandu hwezviitiko.
Iyo dhizaini inoshanda yakaparadzaniswa nefenicha, ine nzvimbo yekurara uye nzvimbo yechiitiko. Tichiratidzira mamiriro ese ezvemuchadenga, isu takasarudza zvakapfava uye zvakapfava zvinhu kuti tivhare zvese nechengetedzo yevana, kuitira kuti kufunga kunanga pamoyo pevana.
Zita rizere reprojekti: Sunac Dongfang Chenyuan Showroom
Kero yeprojekiti: Changchun
Yakaomarara fanicha dhizaini: FENGYA 76 makore epamba tekinoroji (Shenzhen) Co.
Dhizaini nguva: 2021.01
Nzvimbo yenzvimbo: 130㎡
A-Chikamu: Unitech North China Changchun Kambani
Tsigiro yakakosha: Zhang Qingxun, Zhu Lu
Photography Chikwata: Trigonometry
Pakapfuura :: Imba Yechikoro Dunhu Inopaza Kupfuura neiyo "Yakare Uye Yakashongedzwa" Uye Inotangazve Hupenyu Hwehupenyu ｜ Shuangbao Dhizaini
2021 / 08 / 13 4198